Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara igwe ọkụ gas | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
N’ọtụtụ ụlọ, a na-eji ndị na-agba mmiri ọkụ mmiri iji mee ka mmiri saa ma ọ bụ n’ebe a na-esi nri. Ọ dị mkpa ịmata nke igwe ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchekwa ego ọkụ eletrik ma mee ọtụtụ ihe anyị nwere. Taa, anyị ga-ekwu maka ọkụ gas na-ekpo ọkụ.
Na post a ị nwere ike ịmụ ihe niile metụtara ụdị esi mmiri ọkụ a. Site na ihe ha bụ na otu o si arụ ọrụ na nke ndị kachasị adaba iji ya, na-agabiga uru na ọghọm dị na nke ọ bụla. Want chọrọ ịmatakwu banyere ya?
1 Gịnị bụ igwe gas na-ekpo ọkụ?
3 Ofdị nke gas gas
3.1 Mmiri mmiri gas
3.2 Low NOx gas ji esi mmiri ọkụ
3.4 Igwe ikuku gas nke ikuku
5 Uru nke igwe gas
Gịnị bụ igwe gas na-ekpo ọkụ?
Igwe gas na-ekpo ọkụ bụ ihe nwere mmiri ga-eme ka ọ kpoo ọkụ nke mmanụ ya bụ gas.
Anyị niile chọrọ ịchekwaa ọtụtụ ihe n'akpa anyị n'okwu ụlọ ka anyị nwee ike imefu ya na njem, ịchọrọ ma ọ bụ ihe ọ bụla anyị chọrọ. Na mgbakwunye, site n'iji ike anyị na-etinye itinye aka na ọnọdụ nke gburugburu ebe obibi. Ndị na-esi mmiri ọkụ, dị ka akụrụngwa ndị ọzọ dị n'ụlọ, dị ezigbo mkpa na ndụ anyị, ebe ọ bụ na ha na-ekpo ọkụ mmiri anyị na-eji.
Họrọ ezigbo ihe nlereanya ma ọ bụ na ọ dabere kpamkpam n’ihe ọmụma bara uru nke igwe ji esi mmiri ọkụ kachasị mma maka ọnọdụ anyị. Ọ dị mkpa ịmata nke esi mmiri ọkụ anyị na-aga ịhọrọ dabere na nlereanya, mmezi ọ chọrọ, ndegharị na arụmọrụ. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịhọrọ nke kacha masịrị anyị, anyị nwere ike ịchekwa nnukwu ego na njedebe nke ọnwa. Na mgbakwunye, ekwesiri iburu n'uche na, ka elu arụmọrụ na ogo nke igwe mmiri ọkụ ahụ, obere ihe anyị ga-emebi gburugburu ebe obibi na mmetọ a na-ewepụta.
Ndị na-esi mmiri ọkụ nwere onye na-ere ọkụ nke na-ahụ maka ịmalite ọkụ ọkụ gas. Gas a bụkarị gas nkịtị, ọ bụ ezie na e nwekwara ndị na-esi mmiri ọkụ nke ndị na-enye mmanụ bụ propane ma ọ bụ mmanụ dizel. Mgbe gas na-ekpo ọkụ, ọ na-eme ka mmiri dị n'ime tank ahụ ghọọ uzuoku ma na-apụ na sekit iji kpoo ụlọ ndị ọzọ ọkụ. Enwere ike ịgba mmiri mmiri a iji jikọọ ha na radiators ma ọ bụ ọbụna okpomoku ọkụ.
Propane ji esi mmiri ọkụ mkpa tank ọzọ iji chekwaa gas, ya mere, anyị na-ewere ohere karịa ka anyị ga-achọ ịrara maka ụdị akụrụngwa a. Ndị dizel dị ọnụ ala ma nyekwa anyị ohere isi nri. Na mgbakwunye, ọ chọrọ ntụgharị maka gas ndị emere n'oge ọkụ ọkụ, n'ihi ya, ha chọkwara ntinye ọzọ.
Ihe ndị a niile na-eme ka ịwụnye ọkụ ọkụ dị otú ahụ na-ewe oge ma na-emekwu ọnụ. Maka nke a, igwe ikuku gas bụ nke kacha dịrị nchebe na nke bara uru. Ebumnuche nke ikuku gas bu ihe zuru ebe nile ma jiri ya mee ihe nke na amara ya Obodo Gas.
Ofdị nke gas gas
E nwere ụdị ikuku gas dị iche iche na, dịka e kwuru na mbụ, anyị ga-ama nke ọma n'ime ha ịhọrọ ịhọrọ akụ anyị nke ọma, ka emechara, chekwaa ego.
Mmiri mmiri gas
Ndị na-esi mmiri ọkụ a nwere ụlọ combustion a kara akara na erila ikuku site n'ime ụlọ. Akụkụ a na-eme ka ha nwee nchebe, ebe ọ bụ na gas ndị e mepụtara n'oge ọkụ ọkụ anaghị abanye na ikuku anyị na-ekuru.
Low NOx gas ji esi mmiri ọkụ
Ngwunye oxide nke nitrogen na-emetọ ogige ndị mepụtara n'oge usoro ọkụ na ikuku oxygen. Ndị na-esi mmiri ọkụ nke na-enweghị ụdị ọpụpụ ọ bụla na-emerụ emerụ ma ghara ịrụ ọrụ nke ọma. Typedị mmiri ọkụ a nwere atụmatụ yiri nke gara aga mana ọ dị njikere iwepụ obere nitrogen oxides.
Ha na-edobe ihe nlereanya ahụ ka gas siri ike, mana ha nwere uru nke iji ike ikuku mmiri eme ihe ugboro ugboro. Nke ahụ bụ, ha nwere sekit nke ahụ redirects jiri mmiri vepo ka, n’aka nke ya, na-enyere aka kpoo ndị ọzọ fọdụrụ n’ime mmiri. Nke a na-ebelata ego zuru ezu nke ike eji kpoo mmiri ahụ ọkụ, ebe ọ bụ na ọ na-erite uru nke okpomọkụ fọdụrụ nke uzuoku ahụ mepụtara.
Ha dịkwa nchebe ma rụọ ọrụ nke ọma ma anyị nwere ike ịchekwa nnukwu ego na oriri gas.
Igwe ikuku gas nke ikuku
Na ihe eji esi mmiri ọkụ a, n'adịghị ka ndị gara aga, ụlọ ọkụ na-ere ọkụ na-emeghe ma ikuku eji ekpo ọkụ mmiri bụ anakọtara site na ebe ebe ọkụ ọkụ ahụ dị. Ilersgbọ mmiri ndị a na-emerụ ọtụtụ ihe karịa ma ha anaghị arụ ọrụ nke ọma ma dịkwa mma. Ọzọkwa, ha na-ebugharị ụfọdụ gas na-emerụ ahụ n'ụlọ anyị.
Ikwu okwu banyere ọnụahịa izugbe dịtụ mgbagwoju anya, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ puku ụdị nke ụdị ọ bụla. Agbanyeghị, igwe ndị na-ekuku ikuku (ọ bụ ezie na ha pere mpe kachasị mma) bụ ndị dị ọnụ ala. Ọnụ ya dị ihe dị ka euro 300. Obere ogo, ọnụ ala. Mana ọ bụghị maka nke ahụ, anyị kwesịrị ịhọrọ maka ndị a. Anyị ga na-emetọ karịa na-emefukwu gas na ogologo oge dị ka arụmọrụ ya dị ala.
N'aka nke ozo, igwe oku mmiri nwere onu ahia na agbanwe agbanwe n'etiti euro 400 na 1400. Ha nwere ọnụahịa mbụ dị oke ọnụ karị, mana ịbụ ndị na-enweghị mmetọ na ịrụ ọrụ nke ọma, n'ikpeazụ, ọ ga-apụta obere oriri gas na, yabụ, ọnụ ala.
Uru nke igwe gas
Iji igwe ikuku gas eme ihe nwere uru ya ma ha bụ ihe ndị a:
Ọnụahịa ya na-adịkarị ọnụ ala (site na euro 300). Enwere ike ịnwe ya n'ụlọ.
Mmetụta ya na ikpo mmiri ọ dị ezigbo ọsọ ma dịkwa mma. Na mgbakwunye, dịka o nwere thermostat na mpempe akwụkwọ, enwere ike ịhazi ya ka ọ dị ọkụ na ọnọdụ okpomọkụ anyị chọrọ.
Ha anaghị ewerekarị ohere ma nwee ya ndụ nke ọtụtụ afọ.
Ọ na-esiri ike nhicha ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ kpo oku pụtara na ọ naghị ewepụta mkpọtụ.
N’ikpeazụ, ọ dịkwa mkpa ịkpọ aha ọghọm dị n’ọkụ a. Naanị ọghọm pụtara na ya bụ mmezi ya. A ga-ekpocha ha otu ugboro n'afọ iji zere ndakpọ na jams na, karịa ihe niile, iji gbochie ihe ọghọm.
Site na ozi a ị nwere ike ịhọrọ ụdị mmiri ọkụ dị mma maka gị ma chekwaa ka o kwere mee na kpo oku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Omenala ulo » Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara igwe ọkụ gas
Imaara Ministri nke Gburugburu Ebe Obibi na Atụmatụ gbasara Ohere
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara pellet stoves